Concluded from Yahoo news and comments
Just the day after election in Burma, Republican senator, Mitch McConnell, sent outamessage to renew the support for Aung San Suu Kyi and democratic forces within Burma, inastatement to US President Obama. Yahoo has the news, http://news.yahoo.com/s/afp/myanmarvoteussenate, and Americans are pouring their comments with anger and concern as if republicans are pushing President Obama to go to war with Burmese junta just like President Bush invaded to Afghanistan.
I personally think the word "to get tough" is confusing and signal to misunderstanding on how United State government should support to democratic forces in Burma. I amaBurmese who work in US and contributing tax to the United State government, I do want to overthrow Burmese military regime with continuous support from United State government, but it doesn't necessarily mean to invade Burma with the tax I am paying for. I also don't think US is in the position to engage another military act during the public outcry over the spending tax payer money in Afghanistan war.
Mitch McConnell’s support to renewingaban on imports from Burma earlier this year, I believe this is an urge to the President Obama to put more weight on pressure to military regime; to free Aung San Suu Kyi and all other political prisoners, to send strong signal to Burmese junta and international community that United State government shall only recognize fair election process in Burma. We don’t want to see Burmese dictatorship is being infused and injected by Chinese military influence. The claws of Chinese dragon are stretching out on the world’s map.
Remember, Burmese military regime has capability to conceal the truth elements inside the country and tricked United Nation and other ASEAN counties several times, so they can prolong their ruling power more than 20 years.
တိရိစ္ဆာန်တို့ ယာတောမြေ (၂ - ၂)
ပထမ ငါးမိနစ် ခန့်အထိ တိရိစ္ဆာန်တို့သည် သူတို့၏ အောင်မြင်မှုရလဒ်ကို သိပ်မယုံကြည်နိုင်ကြ။ ပထမဦးစွာ သူတို့သည် ယာမြေ ခြံစည်းရိုး ပတ်ပတ်လည် တစ်လျှောက်လုံး ကဆုန်ပေါက်ပြေးလွှားကာ လူတစ်ယောက်မျှ ခိုအောင်းပြီး မရှိစေရန် ကြည့်ရှု့စစ်ဆေးကြသည်။ ထို့နောက် ကိုသာဒွန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အရာမှန်သမျှ ဖယ်ရှာပစ်ဖို့ ခြံအဆောက်အအုံများဆီသို့ ပြန်လည်ပြေးလွှားလာကြသည်။ မြင်းဇောင်း တဖက်တွင်ရှိသော အလုပ်ရုံခန်း တံခါးသည်လည်း ကျိုးပဲ့ကာ ပွင့်နေသည်။ သံတို သံစများ၊ သံနားကွင်းများ၊ ခွေးချည်သံကြိုးများ၊ ဝက်များ သိုးများကို ကို သင်းကွပ်ရာတွင် ကိုသာဒွန်း သုံးလေ့ရှိသော ဓါးများ အစရှိသည်တို့ကို ပစ်ပေါက်ထုတ်ကြသည်။ နဖားကြိုးများ၊ နားပတ်ကြိုးများ၊ မြင်းပါးချုပ်များ၊ နားချပ်များ၊ ကြာပွတ်တံများ အားလုံးကို စုပုံကာ ယာကွင်းပြင်တွင် မီးရှို့ပစ်ကြသည်။ ကြာပွတ်တုတ်များ မီးလောင်ကျွမ်းနေသည်ကို ကြည့်ကာ တိရိစ္ဆာန်များ မြူးတူး ခုန်ပေါက် ပျော်ရွှင်ကြသည်။ ဝက်ကြီး ဖြူတုတ်က မြင်း လည်ဆံမွေးနှင့် အမြှီး တို့တွင် တန်ဆာ ဆင်လေ့ရှိသော ဖဲပြားကြိုးများကို မီးပုံထဲသို့ ပစ်ထည့်သည်။
“ဖဲကြိုး တွေဟာ ကဝတ်တန်ဆာတွေဖြစ်သလို လူတွေရဲ့ အမှတ်အသားတွေ ဖြစ်တယ်.. တိရိစ္ဆာန်တွေဟာ အဝတ်အစား ဝတ်ဖို့ မလိုအပ်ဘူး” လို့ ဖြူတုတ်က ဆိုတယ်။
အဲဒီ စကားကို မြင်ကြီး ဘိုးနီကြားသော အခါ နွေရာသီတုန်းက ယင်ခြောက်ဖို့ သူသုံးလေ့ရှိသော မြက်ခြောက်ဦးထုတ်ကလေးကို မီးပုံထဲသို့ပစ်ထည့်လိုက်သည်။
ခဏအတွင်းမှာပင် တိရိစ္ဆာန်တို့သည် ကိုသာဒွန်းနှင့် ပတ်သက်သမျှ အရာများ အားလုံးကို ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ကြသည်။ ဝက်ကြီး သန်းရွှေက တိရိစ္ဆာန်တို့ကို အစာသိုလှောင်ခန်းသို့ ဦးဆောင်ခေါ်သွားကာ အားလုံးကို ဝေပုံးကျ ပြောင်ဖူး နှစ်ဆတိုး၍ ကျွေးမွေးလေသည်။ ခွေးတို့ကို ဘီစကစ် နှစ်ချပ် စီ ကျွေးသည်။ ထို့နောက် ဗမာပြည်ရဲ့ မျိုးချစ် အာဇာနည်များ သီချင်းကို ခုနစ်ကြိမ် ဆက်တိုက် သီဆိုပြီး ညရောက်တော့မှ အနားယူကြလျက် တစ်ခါမျှ မရရှိဘူးသော ပျော်ရွှင် အိပ်စက်ခြင်းမျိုးဖြင့် အိပ်စက်ကြလေသည်။
သူတို့သည် ထုံစံအတိုင်း မနက် လင်းအာရုဏ်တွင် နိုးထကြသည်။ ထို့နောက် ယမန်နေ့က ကြီးမြတ်ခမ်းနားသည့် အဖြစ်အပျက်တို့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကို သတိရကြကာ မြက်ခင်းပြင်ကွက်လပ်သို့ ပြေးထွက်လာကြသည်။ ကွင်းပြင်ကွက်လပ်မှ ခပ်လှမ်းလှမ်းသို့ ဆင်းသွား လိုက် လျှင် ယာတောမြေကို အထက်စီးမှ လှမ်းမြင်နိုင်သော တောင်ကုန်းမို့မို့ လေး ရှိသည်။ တိရိစ္ဆာန်တို့သည် ထိုတောင်ကုန်းထိပ်သို့ ပြေးတက်သွားကြကာ ကြည်လင် သန့်စင်သော နေရောင် အောက်တွင် ယာတောမြေ ပတ်ပတ်လည်ကို ငေးမောကြည့်ရှု့ကြလေသည်။ ဟုတ်ပေသည်… ထိုယာတောမြေသည် သူတို့ မြေ။ ရှု့မြင်သမျှ အရာအားလုံးတို့ကို သူတို့ ပိုင်ဆိုင်သည်။ ထို ကျေနပ်ပီတိဖြစ်မှုတို့ ဖြင့် သူတို့သည် လှည့်ပတ် ကခုန်ကြလေသည်။ ပျော်ရွှင် စိတ်လှုပ်ရှားမှုတို့ဖြင့်လည်း လေထဲသို့ မြောက်ကြွမြောက်ကြွနှင့် ခုန်ပေါက်ကြသည်။ စိုစိုစွတ်စွတ် နှင့်မြက်ခင်းပေါ်တွင် လူးလိမ့်ကြသည်။ မြက်ချိုချိုတို့ကို ပါးစပ်အပြည့် ဝါးကြသည်။ မြေစိုင်ခဲတို့ကို ကန်ကျောက်ကြကာ မြေရနံတို့ မွှေးထုံ နေသည်ကို နမ်းရှုပ်ကြသည်။ ထို့နောက် ယာတောခြံမြေတစ်ခုလုံးကို လှည့်ပတ်ကြည့်ရှုကြကာ ထွန်ယက်ခင်း၊ မြက်ခြောက်ခင်း၊ အသီးအနှံခင်း၊ရေကန်တို့ကို တမေ့တမေားဖြင့် တစ်ခါမှ မမြင်ဘူးသော အရာများကဲ့သို့ ငေးမေားကြည့်ကြသည်။ ထိုအရာတို့သည် ယခုအခါတွင် သူတို့ ပိုင်ဆိုင်သောအရာများ ဖြစ်နေသည်ကို မယုံကြည်နိုင်အောင်ဖြစ်ကြသည်။
ထို့နောက် သူတို့သည် ခြံထဲရှိ အဆောက်အဦးများဆီသို့ ပြန်လှည့်လာကြကာ ယာခြံအိမ် တံခါးဝ အပြင်ဖက်တွင် ငြိမ်သက်စွာ ရပ်လိုက်ကြသည်။ ထိုခြံအိမ်သည်လည်း သူတို့ ပိုင်သော အရာပင် ဖြစ်လေပြီ။ သို့သော် သူတို့သည် အထဲသို့ ဝင်ဖို့ ကြောက်လန့်နေကြသည်။ ခဏကြာသော် ဖြူတုတ်နှင့် သန်းရွှေတို့သည် တံခါးကို ပုခုံးနှင့် တွန်းတိုက် ဖွင့်လိုက်သည်။ အခြားတိရိစ္ဆာန်တို့သည် ဟောကနဲ စုပြုံတိုးဝင်ကြသည်။သူတို့သည် တစ်ခုခုကို မတော်တဆ တွန်းချချိုးဖဲ့ မိမှာဟူသော စိုးရိမ်စိတ်တို့ဖြင့် အလွန်တရာ ဂရုစိုက်သော ခြေလှမ်းတို့ဖြင့် အသာအယာ လျှောက်လှမ်း ဝင်လာကြသည်။ တစ်ခန်းဝင် တစ်ခန်းထွက် ကြည့်ကြသည်။ စကားကိုလည်း ခပ်ကျယ်ကျယ် မပြောရဲ။ ဇိမ်ခံပစ္စည်း ဥစ္စာ များကို မယုံကြည်နိုင်အောင် တအံတသြ ငေးမောကြည်ရှု့ကြသည်။ အိမ်ရာ တို့သည် သူတို့၏ သားမွေတောင်တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ မှန်ချပ်များ၊ မြင်မွှေးဖြင့်လုပ်သော ဆိုဖာ ထိုင်ခုံများ၊ နိုင်ငံခြားဖြစ် ကောဇောများ၊ ပုံတူ ပန်ချီကားချပ် တို့ကို မြင်တွေ့ကြရသည်။ သူတို့ လှေကားအတိုင်း ဆင်းလာကြသောအခါ မြင်းမ မိုမို ပျောက်နေသည်ကို သတိထားမိကြသည်။ ပြန်လှည့်သွားကြည့်ကြသော အခါမှ မိုမိုသည် အကောင်းဆုံးသော အိပ်ရာ ခန်းထဲမှာပင် ရှိနေသေးသည်ကို တွေ့ရသည်။ သူမသည် ကိုသာဒွန်းကတော်၏ အလှပြင် ခုံပေါ်မှ အပြာရောင် ဖဲပြားကြိုးကို ပုခုံးပေါ်တွင် ဟန်နှင့် တပ်ပြီး မှန်ရှေ့တွင် အရူးလို ဟန်ရေးပြကာ သူမကိုယ် သူမ နှစ်သိမ့်ကျေနပ်နေသည်။ အခြားအကောင်များသည် သူမကို ပြစ်တင် ရှုတ်ချကြကာ ထွက်သွားကြသည်။ သူတို့သည် မီးဖိုဆောင်ထဲတွင် ချိတ်ဆွဲထားသော ဝက်သာကြပ်ကင်တို့ကို ယူပြီး မြေမြုတ်ပစ်ကြသည်။ မီးခိုဆောင်ဘေးက အခန်းထဲတွင် ရှိသော ဘီယာစည်ကို ဘိုးနီက ခွာဖြင့် ကန်ပစ်လိုက်သည်။ ထို့အရာတို့မှအပါး အခြား ဘာမှ မထိ မတို့ခဲ့ကြချေ။ ထိုနေရာမှာပင် အားလုံး တစ်ညီတစ်ညွှတ်တည်း ဆန္ဒပြုကြသည်မှာ ယာခြံအိမ်ကို ပြတိုက်အဖြစ် ထားရှိရန်ဖြစ်သည်။ မည်သည့် တိရိစ္ဆာန်မျှ ဤယာခြံအိမ်တွင် မနေရဟု အားလုံး သဘောတူကြသည်။
တိရိစ္ဆာန်များလည်း သူတို့၏ မနက်စာကို စားသောက်ကြပြီးနောက် ဝက်ကြီးနှစ်ကောင်ဖြစ်သော ဖြူတုတ်နှင့် သန်းရွှေတို့က သူတို့ကို စုရုံး ခေါ်ယူလိုက်သည်။
“ရဲဘော်တို့” လို့ ဖြူတုတ်က အစချီ ပြောလိုက်သည်။ “အခု ခြောက်နာရီ ခွဲပဲ ရှိသေးတယ်။ ငါတို့ တစ်နေကုန် အချိန်တွေ ရှိသေးတယ်။ ဒီကနေ့ ငါတို့ မြက်ရိတ်သိမ်း တဲ့အလုပ်စမယ်။ အဲဒါ မတိုင်ခင် အခြား ကိစ္စတစ်ခုကို အရင် လုပ်ကြရမယ်”
ဝက်တို့သည် လွန်ခဲ့သော သုံးလအတွင်း၌ သူတို့ လုပ်ဆောင်နေသော အလုပ်တို့ကို ဖွင့်ထုတ် ပြောဆိုသည်။ သူတို့သည် ကိုသာဒွန်၏ ကလေးများ ပစ်ထားသော စာလုံးပေါင်းဖတ်စာ စာအုပ်ကို အမိုက်ပုံထဲမှကောက်ယူကာ စာ ရေးတတ် ဖတ်တတ်အောင် လေ့လာခဲ့ကြသည်။ဝက်ကြီး သန်းရွှေက အဖြူ နှင့် အမဲ ဆေးအိုးတို့ယူစေလျက် တိရိစ္ဆာန်တို့ကို တုတ်တန်းငါးတန်း ရှိသော ခြံတံခါးမကြီး ဆီသို့ ဦးဆောင် ခေါ်သွားသည်။ ထို့နောက် စာရေးရာတွင် အကောင်းဆုံးဖြစ်သော ဖြူတုတ်က စုတ်တံကို လက်ဆစ်တွင် ညပ်ကာ တံခါး ထုတ်တန်း ထိပ်ဆုံးတွင် ရေးထားသော “မြန်တိုင်း မွေးမြူရေးခြံ” ကို “တိရိစ္ဆာန်တ်ို့ ယာတောမြေ” ဟု ပြောင်းလဲရေးလိုက်သည်။ အခု အခါမှစပြီး တိရိစ္ဆာန်တို့ ယာတောမြေလို့ ခေါ်ကြမည် လို့ ဆိုသည်။ အဲဒီနောက် သူတို့အားလုံး ယာခြံ အဆောက်အဦးများ ဆီသို့ ပြန်သွားကြသည်။ ဖြူတုတ်နှင့် သန်းရွှေတို့က ထိုနေရာသို့ လှေကားတစ်စင်း ယူလာစေကာ စပါးကျီ၏ နံရံကို မှီပြီး လှေကားထောင်စေသည်။ ထို့နောက် လွန်ခဲ့သော သုံးလအတွင်း သူတို့ လေ့လာခဲ့သော အရာကို ရှင်းပြကြသည်။ ဝက်တို့သည် တိရိစ္ဆာန်ဝါဒ၏ အခြေခံ အချက်အလက်တို့ကို ပညတ်ချက် ခုနှစ်ချက် အဖြစ်သို့ ရေးဆွဲနိုင်ခဲ့ကြောင်း ပြောပြကြလေသည်။ ထို ပညတ်ချက် ခုနှစ်ချက်ကို နံရံတွင် အခု ရေးဆွဲကြမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ပညတ်ချက်တို့သည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ မရသော အခြေခံဥပဒေသများ ဖြစ်ကာ ယာတောမြေတွင် ရှိသော တိရိစ္ဆာန်တို့ အားလုံး ထာဝရ လိုက်နာကျင့်သုံးရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြသည်။ ဝက်တစ်ကောင်အတွက် လှေကားတက်ရာတွင် အခက်အခဲတို့ရှိပေသည့် ဖြူတုတ်သည် ရအောင် လှေကားတက်ကာ စာရေးရန် ပြင်ဆင်သည်။ ဝက်ပေါက် ကိုကွာစိက နောက်က လိုက်တက်ကာ ဆေးအိုးတို့ကို ကိုင်ပေးသည်။ အမဲညစ်ရောင် နံရံတွင် ပညတ်ချက်တို့ကို အဖြူရောင် စာလုံး အကြီးကြီးတို့ဖြင့် ရေးဆွဲကြကာ အဝေးနေရာကပင် လှမ်းမြင်နိုင်လေသည်။ စာလုံးများမှာ
၁။ ခြေနှစ်ချောင်း ရှိသူ မှန်သမျှသည် ရန်သူဖြစ်သည်။
၂။ ခြေလေးချောင်း သို့မဟုတ် အတောင် ရှိသူတို့သည် မိတ်ဆွေဖြစ်သည်။
၃။ တိရိစ္ဆာန်များ အဝတ် မဝတ်ဆင်ရ။
၄။ တိရိစ္ဆာန်များ အိပ်ရာ ခုတင်ဖြင့် မအိပ်စက်ရ။
၅။ တိရိစ္ဆာန်များ အရက်သေဇာ မသောက်စားရ။
၆။ တိရိစ္ဆာန်များ အချင်းချင်း မသတ်ဖြတ်ရ။
၇။ တိရိစ္ဆာန်များ အားလုံး တန်တူညီမျှ ကြသည်။
စာလုံးတို့ကို လှပသေသပ်စွာ ရေးဆွဲနိုင်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် “မိတ်ဆွေ” အစား “မိတ်စွေ” လို့ ရေးထားသည်။ ထို့အပြင် “များ” ဆိုသော စာလုံးတစ်လုံးသည် ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေသည်။ ဖြူတုတ်က အခြားအကောင်များ နားလည် စေနိုင်ရန်အတွက် အသံကျယ်ကျယ်ဖြင့် ဖတ်ပြလေသည်။ တိရိစ္ဆာန်အားလုံး ခေါင်းတစ်ငြိမ့်ငြိမ့်နှင့် သဘောတူ ထောက်ခံကြသည်။ ထူးချွန်သော အကောင်များသည် ပညတ်ချက် ခုနှစ်ချက်ကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း နုတ်တိုက် မှတ်မိလေသည်။
“ရဲဘော်တို့” လို့ ဖြူတုတ်က စုတ်တံကို ပစ်ချလိုက်ရင်းနဲ့ အော်လိုက်သည်။ “ကောက်ရိုးခင်း ဆီကို သွားကြမယ်။ ကိုသာဒွန်းနဲ့ သူ့လူတွေ ကောက်ရိတ်သိမ်း လုပ်နိုင်တာထက် ငါတို့ ပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ကြပြီး ဂုဏ်ယူ ကြရအောင်”
ထိုအချိန်တွင် နွားမသုံးကောင်သည် အချိန်ကုန်လာသည်နှင့် အမျှ နေရထိုင်ရခက်လာကာ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ငြီးတွားလာကြသည်။ သူတို့အတွက် နှစ်ဆယ့်လေးနာရီ ပတ်လုံး နွားနို့ မညှစ်ရသေးချေ။ သူတို့၏ နို့အိမ်သည် ပေါက်ကွဲလုမတတ် တင်းမာနေသည်။ သူတို့အားလုံး ခဏမျှ စဉ်းစားလိုက်ကြပြီးနောက် ဝက်တို့သည် ပုံးခွက်တို့ကို ယူလာစေလျက် နွားမများ ထံမှ နွားနို့ကို အောင်မြင်စွာ ညှစ်ယူနိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဝက်တို့၏ လက်များသည် နို့ညှစ်သည့် အလုပ်ကို လွယ်လင့်တစ်ကူ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ မကြာခင်တွင် အမြုတ်များ ဝေ့တက်နေသော နွားနို့ပုံး ငါးပုံး ရလာသည်။ အခြား တိရိစ္ဆာန်များလည်း နွားနို့ပုံးများ ကို စိတ်ဝင်တစားနှင့် ဝိုင်းဝန် ကြည့်ကြသည်။
“ဒီ နွားနို့တွေကို ဘာလုပ်ပစ် ကြမလဲ” လို့ တိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်က မေးလိုက်သည်။
“ကိုသာဒွန်းကတော့ နွားနို့ အချို့ကို ကျွန်မတို့ အစားတွေထဲမှာ ရောတယ်” လို့ ကြက်မတွေက ပြောသည်။
“ရဲဘော်တို့ နွားနို့တွေ အတွက် စိတ်ပူပန်မနေကြနဲ့” လို့ ဝက်ကြီး သန်းရွှေက သူကိုယ်သူ နွားနို့ပုံးရှေ့တွင် ရပ်ကာ အော်လိုက်သည်။ “ဒါတွေကို ကြည့်ပြီး စီစဉ်လိုက်မယ်။ ယာမြေမှာ ရိတ်သိမ်းရမှာ ပိုပြီး အရေးကြီးတယ်။ ရဲဘော် ဖြူတုတ်က ဦးဆောင်ပြီး လမ်းပြလိမ့်မယ်။ ငါကတော့ ခဏနေရင် နောက်က လိုက်ခဲ့မယ်။ ချီတက်ကြ ရဲဘော်တို့။ မြက်ခြောက်တွေ က စောင့်နေကြပြီ”
တိရိစ္ဆာန်တို့လည်း ကောက်ရိုးခင်းဆီသို့ ရိတ်သိမ်းရန် ချီတက်သွားကြလေသည်။ ညနေခင်း သူတို့ ပြန်လာကြသောအခါ နွားနို့များ မရှိတော့သည်ကို သူတို့ သတိပြုမိကြလေသည်။
တိရိစ္ဆာန်တို့ ယာတောမြေ (၂ - ၁)
အင်္ဂလိပ်စာကနေ မြန်မာလို ဘာသာပြန်ကြတဲ့ အထဲမှာ သမ္မာကျမ်းစာအုပ် ရယ်၊ အနိုင်မခံ ဆိုတဲ့ ကဗျာကို အကြိုက်ဆုံးပါ။ သမ္မာကျမ်းစာအုပ်က လူတိုင်း ဖတ်လို့ရတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်တယ်။ မြန်မာစာ ဖတ်ဖို့ အင်္ဂလိပ်စာတတ်စရာမလိုပဲ ဖတ်လို့ရတဲ့ စာမျိုးပေါ့။ သိပ်ကောင်းတယ်။ အခုခေတ်မြန်မာစာပေတွေကမှာ မြန်မာစာ ဖတ်ဖို့ တော်တန် အင်္ဂလိပ်စာတတ်ဖို့ လိုတယ်။ အနိုင်မခံ ကတော့ Invictus ဆိုတဲ့ ကဗျာကို ပြန်ယူတာ သိပ်ပြီး အဓိပ္ပာယ် ထိမိတာပဲ။ ဗိုလ်ချုပ် ပြန်တာ သိပ်ကောင်းတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သူနေရာဝင်ပြီး ဘာသာပြန်ရင် အဲဒီလို ထွက်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အခု ဒီ တိရိစ္ဆာန်တို့ ယာတောမြေ ဆိုတာလည်း Animal Farm ကို ဘာသာပြန်တာ။ စင်းလုံးချော ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဘာသာပြန်စာပေတော့ ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်လိမ့်မယ်။ သို့ပေမယ့် စာရေးသူရဲ့ အရေးအသားနဲ့ ကြိုးစားမှုတစ်ခုပါ။ ဖန်တီးမှုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာသာပြန် တာကိုး။
နောက် သုံးရက်လောက်ကြာပြီးသော် ဖိုးဝက်ဖြူကြီး သည် အိမ်ပျော်နေရင်းပင် ငြိမ်သက် အေးချမ်းစွာ ဘဝမီးဇာကုန်ခန်း သေဆုံးသွားခဲ့သည်။ သူ၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို ရိတ်သိမ်းပြီးစ ယာမြေ ၏ တဖက်စွန်း အခြေတွင် မြုတ်နှံလိုက်ကြသည်။
အဲဒီတုန်းက တပေါင်းလဆန်း အစောပိုင်းလောက် ဖြစ်သည်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း သုံးလလောက်အတွင်း လျှို့ဝှက် လှုပ်ရှားမှုများ ရှိလာကြသည်။ ဖ်ိုးဝက်ဖြူကြီး ပြောကြားခဲ့သော စကားတို့က ယာတောမြေတွင် ရှိသော တိရိစ္ဆာန်တို့ကို အသိတရား ပိုမို ရရှိစေကာ ဘဝကို အတွေးသစ် အမြင်သစ်တို့ဖြင့် ရှု့မြင်တတ်စေသည်။ ဖိုးဝက်ဖြူကြီး ခန့်မှန်းခဲ့သော ပုန်ကန်ထကြွမည့် အရေးအခင်း ဘယ်တော့ ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ ယာတောမြေမှ တိရိစ္ဆာန်တို့ မခန့်မှန်နိုင်ကြ။ သူတို့ အသက်ရှင်နေစဉ် ကာလအတွင်း ဖြစ်ပွားလိမ့်မည်လို့လည်း သူတို့ စဉ်းစားမိချင်မှ စဉ်းစားမိကြလိမ့်မည်။ သိုပေမယ့် ဖြစ်ပွားလာမည့် ပုန်ကန်ထကြွမှုအတွက် ပြင်ဆင်ထားရမည့် တာဝန် သူတို့တွင် ရှိသည်ကိုတော့ ကောင်းကောင်းကြီး နားလည်ထားကြသည်။ ပညာပေးရေး၊ စည်းရုံး လှုံ့ဆော်ရေး တာဝန်တို့သည် ဝက်တို့၏ တာဝန် အလိုလိုဖြစ်လာသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် ဝက်တို့သည် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်သည့် တာဝန်တွင် အတော်ဆုံး တိရိစ္ဆာန်များဟု သတ်မှတ်ထားကြသည်။ ဝက်တို့ အကြားတွင် ပိုမို ထူးချွန်သော ဝက်ပျိုသိုး နှစ်ကောင်မှာ ဖြူတုတ် နှင့် သန်းရွှေတို့ ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့သည် ကိုသာဒွန်းက ရောင်းရန်အတွက် သပ်သပ်မျိုးဖောက်ထားသော အကောင်များသည်။ သန်းရွှေသည် အကောင်ကြီးကြီး၊ ကြောက်မက်ဖွယ် အသွင် အပြင်ရှိသော ကျောက်ဆည် ဝက်သိုးမျိုးဖြစ်သည်။ ယာတောမြေတွင် တစ်ကောင်တည်းသော ကျောက်ဆည် ဝက်သိုးဖြစ်သည်။ စကား အများကြီး မပြော။ သို့ပေမယ့် သူလိုရာ ရအောင်ယူသော အစွမ်းအစရှိသူဟု သိထားကြသည်။ ဖြူတုတ် ကတော့ သန်းရွှေနှင့် စာလျင် စကားတွေအများကြီးပြော၊ စွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသော ဝက်တစ်ကောင် ဖြစ်သည်။ အပြောအဟော လည်း ကောင်းသလို၊ အရာရာကို တွေးတောစီမံ တတ်သော အကောင်လည်း ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် သူ၏ အမှုအကျင့်သည် အပြောနှင့် မညီ လေးလေးနက်နက် မရှိသူဟု အားလုံးက သတ်မှတ်ထားကြသည်။ ယာတောမြေတွင် ရှိသော အခြားသော ဝက်များမှာ သာမန်ဝက်များသာ ဖြစ်ကြသည်။ သာမန်ဝက်များ အကြားတွင် ခပ်သေးသေး ခပ်ဝဝ နှင့် “ကွာစိ” အား သိသူများကြသည်။ ပါးစုံ မို့မို့၊ မျက်လုံး လက်လက်၊ စူးစူးရှရှအသံနှင့် သွက်လက် ချက်ချာသည်။ စကားပြောကောင်းသူလည်း ဖြစ်သည်။ အငြင်း အခုန်ဖြစ်လို့ ခက်ခက်ခဲခဲ ဖြေရှင်းရတော့မည့် အပိုင်းရောက်လျင် သူသည် ဟိုရှောင် ဒီရှောင်လုပ်ကာ အမြှီးတရမ်းရမ်းနှင့် လိုရာကို ဆွဲယူပြောဆိုစွမ်းရှိသူ ဖြစ်သည်။ ကွာစိသည် အမဲကို အဖြူ ဖြစ်အောင် ပြောနိုင်စွမ်းရှိသူဟု အများသူငြာက ပြောကြသည်။
ထိုဝက်သုံးကောင်တို့သည် ဖိုးဝက်ဖြူကြီး ပြောဟောခဲ့သော အကြောင်းအရာတို့ကို အသေးစိတ် ဆန်းစစ်ကာ စဉ်းစားစရာ အတွေးအခေါ်အဖြစ် တည်ဆောက်ယူကြသည်။ ထိုအတွေးအခေါ်ကို သူတို့က တိရိစ္ဆာန်ဝါဒဟု အမည် သမုတ်သည်။ ကိုသာဒွန်း အိမ်ရာဝင်သွားသည့် နောက် ညတိုင်းလိုလို သူတို့သည် စပါးကျီထဲတွင် လျို့ဝှက် တွေ့ဆုံကြကာ တိရိစ္ဆာန်ဝါဒ၏ သဘောတရားရေးရာများကို အခြား တိရိစ္ဆာန်များအား အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြကြသည်။ အစပိုင်းတွင် အားလုံးသည် စိတ်ပါဝင်စားမှု သိပ်မရှိကြ။ ပျင်းရိပျင်းတွဲနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးကြသည်။ အချို့ တိရိစ္ဆာန်များက ကိုသာဒွန်းပေါ်တွင် သခင်ကဲ့သို့ သစ္စာတရား ထားရှိဖို့ ပြောဆိုကြသည်။ “ကိုသာဒွန်က ငါတို့ကို ကျွေးမွေးထားတာ။ သူမရှိရင် ငါတို့ အစာငတ်ပြီး သေကုန်လိမ့်မယ်” ဟု မရင့်ကျက်သေးသော အမြင်တို့ ရှိကြသည်။ အချို့သော တိရိစ္ဆာန်များကလည်း “ငါတို့ သေသွားပြီးမှ ဘာဖြစ်ဖြစ် ငါတို့က ဘာ ဂရုစိုက်စရာ လိုသေးလို့လဲ” ဟူသော မေးခွန်းမျိုး မေးကြသည်။ အချို့ကလည်း “ဒီ တော်လှန်ပုန်ကန် မှု ဖြစ်သွားလို့ ငါတို့တွေ အလုပ် လုပ်လုပ်၊ မလုပ်လုပ် ဘာများ ထူးခြားသွားမှာလဲ” ဟူသော အတွေးမျိုး ရှိကြသည်။ ဝက်တို့သည် ထိုကဲသို့သောတိရိစ္ဆာန်များကို နားလည် သဘောပေါက်အောင် ခက်ခက်ခဲခဲ ရှင်းလင်းပြောပြရသည်။ ထိုသို့သော အတွေးအခေါ်တို့သည် တိရိစ္ဆာန်ဝါဒ၏ အဓိက အယူအဆတို့နှင့် ဆန့်ကျင်ကြောင်း နားလည် သဘောပေါက်အောင် ပြောသည်။ မေးခွန်းများ ပြန်လည် မေးမြန်းကြသည်ထဲမှ တန်ဖိုးမရှိ အဓိပ္ပာယ် မရှိဆုံးသော မေးခွန်းမှာ အဖြူရောင်မြင်းမ မိုမိုမေးသော မေးခွန်းဖြစ်သည်။ သူမက ဖြူတုတ်ကို ပထမဦးဆုံး မေးသော မေးခွန်းမှာ “တော်လှန် ပုန်ကန်မှုတွေ ပြီးသွားလျင် သကြားခဲတွေ စားရအုံးမှာလား” လို့ မေးသည်။
“မစား ရဘူး” ဟု ဖြူတုတ်က အခိုင် အမာ ပြန်ပြောသည်။ “ငါတို့ ဒီ ယာတောမြေမှာ သကြားခဲ လုပ်ဖို့ အစီအစဉ် မရှိဘူး။ ပြီးတော့ နင့်အတွက် သကြားခဲတွေ မလိုအပ်ဘူး။ နင့် အတွက် ဂျုံနှင့် မြက်ခြောက်တွေဟာ လုံလောက်တယ်”
“ဒါဆို ငါ့ လည်ဆံမွှေးမှာ ဖဲစည်းလှလှလေးတွေရော တပ်ခွင့် ရမှလား” လို့ မိုမိုက မေးပြန်တယ်။
“ရဲဘော် မိုမို.. နင် မြတ်နိုးနေတဲ့ အဲဒီ ဖဲစည်းကြိုးတွေဟာ အခိုင်းခံ အစေခံ ကျွန်တွေရဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တွေသာ ဖြစ်တယ်။ လွတ်လပ်မှု တရားဟာ အဲဒီ ဖဲစည်းကြိုးတွေထက် ပို ထိုက်တန်တယ်လို့ မယုံကြည်ဘူးလား”
မိုမိုလည်း ယုံကြည် သဘောတူသည်ဟု ဆိုလိုက်သည်။ သို့ပေမယ့် သူမသည် လုံးလုံးလျားလျား သဘောတူ လက်ခံသည့် အသွင်တော့ မရှိ။
ထို့အပြင် ဝက်တို့သည် ကျီးနက်ကြီး ဦးမိုး ပြောထားသော အလိမ်အညာတို့ကို ခက်ခက်ခဲခဲဖြင့် တန်ပြန် ဖြေရှင်း ကြရသည်။ ဦးမိုးသည် ကိုသာဒွန်း၏ လက်သပ်အိမ်မွေး တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်သည်။ လျို့ဝှက် စုံထောက်လည်း ဖြစ်သလို လုပ်ကြံသတင်းများ ဖြန့်ဖြူးသူလည်း ဖြစ်သည်။ သူသည် စကားပြော တော်သူဖြစ်သည်။ သူသည် ချိုချဉ်သကြားခဲ တောင် ဟုခေါ်သော ထူးခြားဆန်းကြယ်လှသည့် တိုင်းပြည်ရှိသော နေရာကို သိသည်ဟု ဆိုသည်။ တိရိစ္ဆာန်များ သေဆုံးသွားသည့် အခါ ထိုတိုင်းပြည်သို့ သွားကြရသည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုတိုင်းပြည်သည် မိုးကောင်းကင် အထက် တစ်နေရာတွင် ရှိသည်။ မိုးတိမ်တောင်တို့၏ အထက် ခပ်လှမ်းလှမ်း အဝေးတစ်နေရာ တွင် ရှိသည်ဟု ဦးမိုးက ဆိုသည်။ ချိုချဉ်သကြားခဲ တောင်တွင် ခုနှစ်ရက် ပတ်လုံး သည် တနင်္ဂနွေ နေ့ဖြစ်သည်။ သကြားခဲများ ၊ ပိုက်ဆံခြည် ပင်များ ခြံပတ်ပတ်လည်တွင် စီတန်းပေါက်နေကြသည်ဟု ဆိုသည်။သို့ပေမယ့် တိရိစ္ဆာန်များသည် ဦးမိုးကို မုန်းတီးကြသည်။ ဦးမိုးသည် စိတ်ကူးယဉ် စကားများသာ ပြောပြီး လက်တွေ့ အလုပ်ကြတော့ ဘာမှ မလုပ်ချေ။ ဒါတောင် အချို့ တိရိစ္ဆာန်များသည် ဦးမိုးပြောသော စိတ်ကူးယဉ်ပုံပြင်ဖြစ်သည့် ချိုချဉ်သကြားခဲ တောင် ကို ယုံကြည် မျှော်လင့် နေကြသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် ဝက်တို့သည် အလွန်အမင်း တန်ပြန်ငြင်းခုန်ကြရကာ လောကတွင် ထိုကဲ့သို့သော နေရာမျိုး မရှိကြောင်း တိုက်တွန်းပြောဆိုကြသည်။
သူတို့၏ ယုံကြည်အားကိုးရဆုံးသော နောက်လိုက်မှာ လှည်းဆွဲမြင်းနှစ်ကောင် ဖြစ်သော ဘိုးနီ နှင့် ခင်တုတ်တို့ဖြစ်သည်။ သူတို့နှစ်ကောင်သည် ကိုယ်တိုင် စဉ်းစားတွေးခေါ်ဖို့ ရာ အလွန် ထုံထိုင်း ခက်ခဲသည့် အတွက် ဝက်တို့အား ဆရာတင်ထားရသည်။ ဝက်တို့ ပြောသမျှ လက်ခံယုံကြည်သည်။ အခြားတိရိစ္ဆာန်များ ကို တဆင့်ပြန်ပြောသည့်အခါတွင်လည်း ထွေထွေထူးထူး ငြင်းခုန်လေ့ မရှိကြ။ စပါးကျီထဲတွင်လုပ်သော လျို့ဝှက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတိုင်း မပျက်မကွက် တက်ရောက်လေ့ရှိသည်။ ဗမာပြည်ရဲ့ မျိုးချစ် အာဇာနည်များ သီချင်းကို ဦးဆောင်သီဆိုကာ ထိုသီချင်းဖြင့် တွေ့ဆုံတွေးနွေးပွဲကို အမြဲတမ်း အဆုံးသပ်လေ့ရှိသည်။
အားလုံးမျှော်လင့်ထားသည်ထက် ပုန်ကန်ထကြွမှုမှာ ပိုမို စောစီးစွာဖြင့် အလွယ်တကူ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ကိုသာဒွန်းသည် အုပ်ချုပ်မှုကြမ်းသော ယာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်သည့် အပြင် လွန်ခဲ့သော နှစ်များတုန်းက အလုပ်ကြိုးစားကာ အလွန် အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိခဲ့သည်။ သို့သော် အခုတလောတွင် သူ၏ နှိမ့်ပါး ကျရှုံးသော နေ့ရက်များသို့ ရောက်ရှိလာသည်။ တရားရုံး အမှုတစ်ခုတွင် ငွေများ ဆုံးရှုံးသွားပြီးနောက် စိတ်နှလုံး ခြုံးခြုံးကျကာ အရက်ကိုသာ အဖေါ်ပြု အချိန်ကုန်နေတော့သည်။ တစ်နေကုန်လုံး မီးဖိုဆောင်၌ ကြိမ်ကုလားထိုင် ပေါ်တွင် ထိုင်ကာ သတင်းစာတွေ ဖတ်လိုက်၊ အရက်ကလေး သောက်လိုက်၊ ရံဖန်ရံခါ သူမွေးထားသော ကျီးနက်ကြီး ဦမိုးအား ဘီယာ စိမ်ထားသော ပေါင်မုန့် ဘေးသားလေးများ ကြွေးနေလေ့ရှိသည်။ ကိုသာဒွန်း၏ တပည့် လက်ပန်းများလည်း အလုပ်မလုပ်ကြ။ အချောင်ခိုကြသည်။ ယာမြေခြံထဲတွင်လည်း မျက်ရိုင်းပင်များ အပြည့် ပေါက်နေတော့သည်။ အဆောက်အဦးတို့သည်လည်း အမိုးအကာ မရှိကြတော့။ ခြံစည်းရိုးနွယ်ပင်တို့ ပေါက်ချင်တိုင်း ပေါက်ကြသည်။ တိရိစ္ဆာန်တို့ကိုလည်း အစာ လောက်ငှအောင် မကျွေးကြ။
နယုန်လထဲ ရောက်လာသည်။ မြက်ပင်တို့ ရိတ်သိမ်းဖို့ အချိန်တန်ပြီ။ မိုးတွင်း ဝင်ခါစ စနေနေ့ တစ်နေ့တွင်၊ ကိုသာဒွန်း မေမြို့ တက်သွားသည်။ ညမ်တော စားသောက်ဆိုင်တွင် အမူးလွန်ကာ တနင်္ဂနွေနေ့ နေ့လည်ပိုင်းအထိ အိမ်ပြန်မလာနိုင်ခဲ့။ သူ့တပည့်များကလည်း မနက်စောစော နွားနို့ညှစ်ပြီးသည့်နောက် ယုန်လိုက် ထွက်သွားကြသည်။ ခြံထဲရှိ တိရိစ္ဆာန်များကို အစားကျွေးဖို့ သတိမရကြချေ။ ကိုသာဒွန်း အိမ်ပြန်ရောက်ရောက်ခြင်း၊ ဧည့်ခန်းထဲက ဆိုဖာပေါ်တွင် ရတနာပုံသတင်းစာ ဖတ်ရင်း အိပ်ပျော်သွားသည်။ ည နေပင် စောင်းလာသည်။ တိရိစ္ဆာန်များလည်း အစာ မစားရသေးချေ။ နောက်ဆုံးတွင် သူတို့ သည်းမခံနိုင်ကြတော့။ နွားမတစ်ကောင်သည် အစာသိုလှောင်ခန်း တံခါးကို ဦးချိုနှင့် ချိုးဖောက်ပစ်လိုက်သည်။ ထို့နောက် တိရိစ္ဆာန်အားလုံး အစားအစာများကို ဝင်ရောက် ယူငင်ကြလေသည်။ ကိုသာဒွန်း နိုးလာသည်။ မကြာခင်တွင် သူနှင့် သူ့တပည့် လေးယောက် ကြာပွတ်ကိုယ်စီနှင့် အစာသိုလှောင်ခန်းထဲသို့ ရောက်လာကာ တွေ့ကရာကို ရိုက်နှက် ကြလေတော့သည်။ ဆာလောင် မွတ်သိပ်နေသော တိရိစ္ဆာန်အားလုံး သည်းခံနိုင်စွမ်း မရှိတော့။ ဘာမှ ကြိုတင် စီစဉ် တိုင်ပင် ထားခြင်း မရှိပဲ တိရိစ္ဆာန်များက သူတို့ကို နှိတ်စက်သူများအား ပြင်းပြင်းထန်ထန် တန်ပြန် ပစ်တိုက်ကြသည်။ ကိုသာဒွန်းနှင့် သူတပည့်များလည်း ဖင်အကန်ခံရသည်။ ဘက်ပေါင်းစုံမှလည်း ကန်ကျောက်ခံရသည်။ အခြေအနေသည် လုံးလုံးလျားလျား အထိမ်းအကွပ်မဲ့သွားသည်။ တိရိစ္ဆာန်များ အခုလို တန်ပြန်ခုံခံတာ သူတို့ တခါမျှ မတွေ့ဘူးချေ။ သူတို့ စိတ်တိုင်းကျ နှိတ်စက်ချင်တိုင်း နှိတ်စက်၊ ရိုက်နှက် ချင်တိုင်း ရိုက်နှက် ခဲ့သော သတ္တဝါများက အခုလို ထကြွတုံ့ပြန်ကြသောအခါ သူတို့ သွေးပျက်လုမခန်း ကြောက်ရွံ့သွားကြသည်။ တခဏမျှ ကြာပြီးနောက် သူတို့ကိုယ် သူတို့ ကာကွယ်ဖို့ လက်လျှော့လိုက်ကြကာ ဖနောင့်နှင့် တင်ပါး တသားတည်းကျအောင် ထွက်ပြေးကြသည်။ တစ်မိနစ်ခန့် အကြာတွင် ကိုသာဒွန်းနှင့် တပည့်လေးယောက်လည်း လှည်းလမ်းအတိုင်း တစ်ချိုးတည်း လမ်းမကြီးပေါ်ရောက်သည် အထိ ထွက်ပြေးသွားသည်။ တိရိစ္ဆာန်များက နောက်မှ လိုက်လျက် အောင်ပွဲခံကြလေသည်။
ကိုသာဒွန်း ကတော်သည် အိပ်ခန်း ပြူတင်းပေါက်မှ လှမ်းကြည့်ကာ အဖြစ်အပျက် အလုံးစုံကို မြင်တွေ့လိုက်သည်။ ပိုင်ဆိုင်သည့် ပစ္စည်းအနည်းငယ်ကို ကတ္တီပါအိပ်ထဲတွင် ထည့်ကာ ခြံ၏ အခြားထွက်ပေါက်မှနေ၍ တိတ်တဆိတ် အလျင်အမြန်ထွက်ပြေးလေသည်။ ကျီးနက်ကြီး ဦးမိုးလည်း ထုတ်တန်းမှ ပျံထွက်ကာ ကျီးအာသံပေးလျက် သူမနောက်မှ လိုက်ရသည်။ ထိုအချိန်တွင် တိရိစ္ဆာန်များက ကိုသာဒွန်းနှင့် သူလူ့များကို လမ်းမပေါ်ထိ မောင်းထုက်လိုက်ကာ ထုတ်တန်းငါးတန်းရှိသာ ခြံတံခါးကို ပိတ်ပစ်လိုက်သည်။ တိရိစ္ဆာန်များ ကိုယ်တိုင်ပြန်လည် မသုံးသပ်မ်ိသေးခင် ပုန်ကန် ထကြွမှုသည် အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့သည်။ ကိုသာဒွန်းကို မောင်းထုတ်ခဲ့သည်။ မြန်တိုင်း မွေးမြူရေးခြံသည် တိရိစ္ဆာန်တို့ လက်အောက်သို့ ရောက်လာသည်။
တိရိစ္ဆာန်တို့ ယာတောမြေ အခန်း(၁ - ၂)
“စိတ်သောက ဝေဒနာတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဘဝဟာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ သက်တမ်းစေ့တောင် မနေရဘူး။ ကျွန်တော်ဟာ ကံကောင်းကြတဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေထဲက တစ်ကောင် အပါအဝင်ဖြစ်တယ်လို့ မပြောလိုဘူး။သို့ပေမယ့် ကျွန်တော်ဟာ အခု အသက် တစ်ဆယ်နှစ် နှစ် ရှိပြီ။ သားသမီးတွေ လေးရာကျော် စီးပွားခဲ့ပြီးပြီ။ ဒါဟာ ဝက်တစ်ကောင်ရဲ့ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် ဘဝပဲ။ ဒါပေမယ့် အဆုံးမှာတော့ ဘယ်တိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်မှ ရက်စက်တဲ့ဓားသွားအောက်ကနေ မလွှတ်မြောက်နိုင်ဘူး။ အခု ကျွန်တော့် ရှေ့မှာ ထိုင်နေကြတဲ့ ဝက်ပျိုတွေ၊ တစ်နှစ် အတွင်းမှာ ခင်ဗျာတို့လည်း အခန်းတစ်ခုထဲမှာ ခင်ဗျားတို့ အသက်အတွက် အော်ဟစ် မြည်တမ်းကြရလိမ့်မယ်။ အဲဒီ ကြောက်မက်ဖွယ် အဖြစ်အပျက် ကို နွားတွေ၊ ဝက်တွေ၊ ကြက်တွေ၊ သိုးတွေ၊ အားလုံး ကိုယ်တိုင် ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့ ကြရမယ်။ မြင်းတွေ၊ ခွေးတွေမှာတောင် ပိုပြီး ကောင်းတဲ့ အခွင့်အလမ်း ကံတရားမရှိဘူး။ ဒီမှာ ဘိုးနီ မင်းလည်း မင်းရဲ့ ကြီးမားတဲ့ ကြွက်သားတွေရဲ့ ခွန်အားတွေ ကုန်းခန်းတဲ့ တစ်နေ့ ကိုသာဒွန်း မင်းကို သားသတ်သမားဆီ ရောင်းစားလိမ့်မယ်။ ဒင်းတို့က မင်း လည်ချောင်းကို ဖြတ်ပြီး အသားတွေကို ခွေးစာ လုပ်ပစ်လိမ့်မယ်။ မင်းတို့ ခွေးတွေလည်း အသက်ကြီးလာလို့ သွားတွေ မရှိတော့ဘူး ဆိုရင် ကိုသာဒွန်းက မင်းတို့ လည်ပင်ကို အုတ်ခဲတွေ ဆွဲပြီး ဒီ အနီးအနားက ရေအိုင် ထဲမှ နစ်ပြီး သတ်လိမ့်မယ်။”
“ရဲဘော်တို့ အခုပြောခဲ့တာတွေကို သုံးသပ်ကြည့်ရင် ပြက်ပြက်ထင်းထင်း ရှင်းလင်း မနေဘူးလား။ ကျွန်တော်တို့ ဘဝတွေရဲ့ မကောင်းမှု ဒဏ်တွေဟာ လူသားတွေရဲ့ ရက်စက်တဲ့ အာဏာစွမ်းကြောင့် ခံစားနေရတာဖြစ်တယ်။ လူတွေကို ဖယ်ရှားပစ်ရမယ်။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်အားကနေ ထွက်လာတဲ့ အကျိုးရလဒ်တွေ အားလုံးကို ကျွန်တော်တို့ပဲ ပိုင်ဆိုင်ရမယ်။ နေ့ချင်း ညချင်းပဲ ကျွန်တော်တို့ ချမ်းသားကြွယ်ဝလာပြီ၊ လွတ်လပ်မှုတွေကို ရရှိနိုင်တယ်။ ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေ လုပ်ရမလဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူမျိုးနွယ်စုကို ဖယ်ရှားပစ်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ စိတ်ရော၊ ကိုယ်ပါ နေ့ရော၊ညပါ ကြိုးစားကြရမယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော်က ခင်ဗျာတို့ကို ပြောချင်တဲ့ စကားပဲ။ ရဲဘော်တို့ ပုန်ကန် ထကြွကြလော့။ သူပုန်ထကြဖို့ ဘယ်တော့လည်းဆိုတာ ကျွန်တော် မသိဘူး။ တစ်ပတ် အတောအတွင်းထဲမှာလည်း ဖြစ်ချင် ဖြစ်မယ်။ နှစ် တစ်ရာ လောက် ကြာချင်လည်း ကြာမယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ခြေဖဝါးအောက်က ကောက်ရိုးတွေကို အခုအသေအချာ မြင်နေရသလို ကျွန်တော် သေချာပေါက် ပြောနိုင်တာ တစ်ခုရှိတယ်။ အနှေးနဲ့ အမြန် တရားမျှတမှုကို ရရှိကြရလိမ့်မယ်။ ရဲဘော်တို့ အဲဒါကို ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ဘဝတစ်လျှောက်မှာ အမြဲတမ်း အမှတ်ရ လှုံ့ဆော်နေပြီး စောင့်ကြည့်နေကြပါ။ အမှတ်ရနေပြီးတဲ့ အပြင် ကျွန်တော် ပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေကိုလည်း ခင်ဗျားတို့ရဲ့ နောက်လိုက်တွေဆီ လက်ဆင့်ကမ်းပေးကြပါ။ အဲဒါမှလည်း နောင်လာမယ့် မျိုးဆက်သစ်တွေက အဆင့်ဆင့် လက်ခံရရှိပြီး အောင်ပွဲရတဲ့ အထိ ရုန်းကန် လှုပ်ရှားကြလိမ့်မယ်။”
“ပြီးတော့ ရဲဘော်တို့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ပုန်ကန် ထကြွမှုတွေဟာ ဘယ်တော့မှ အားနည်း၊ အကျိုး မသက်ရောက်တဲ့ အဖြစ်မျိုး မဖြစ်ပါစေနဲ့။ အခြေအတင် စကားများကြတာတွေကြောင့် ဦးတည်ရာ လမ်းကြောင်း မပျောက် ပါစေနဲ့။ သူတို့ က ခင်ဗျာတို့ကို ပြောလိမ်မယ့်။ လူနဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေဟာ ရည်ရွယ်ချက် ဦးတည်ရာ အတူတူပဲ၊ တစ်ဦး အကျိုးစီးပွားဟာ အခြားတစ်ဦး အတွက်ပဲလို့။ အဲဒါကို လည်း ဘယ်တော့မှ နားမယောင်မိပါစေနဲ့။ အဲဒါတွေ အားလုံး ဟာ လိမ်ညာတာတွေပဲ။ လူတွေဟာ ကိုယ့် အကျိုးစီးပွားကလွဲလို့ အခြားသူတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို စိတ်မဝင်စားဘူး။ ကျွန်တော်တို့ တိရိစ္ဆာန်တွေအားလုံး ခိုင်မာ ပေါင်းစည်းညီညွတ်ကြရအောင်။ လုပ်ရှားမှုတွေမှာ ခိုင်မာတဲ့ ရဲဘော်ရဲမက် စိတ်တွေနဲ့ တည်ဆောက်ကြရအောင်။ လူတွေဟာ ရန်သူ။ တိရိစ္ဆာန်တွေဟာ ရဲဘော် ရဲမက်။”
အဲဒီ အချိန်မှာ တစ်ခဲနက် ထောက်ခံအားပေးသံက ဟိန်းကနဲ ထွက်လာတယ်။ ဘိုးဝက်ဖြူကြီး စကားပြောနေတဲ့ အချိန်မှာ ခြေလေးချောင် သတ္တဝါ ကြွက်တွေက တိတ်တဆိတ် သူတို့ တွင်းထဲက ထွက်လာပြီး နောက်ခြေနှစ်ချောင်းနဲ့ ထိုင်ကာ နားထောင်ကြတယ်။ ခွေးတွေက ရုတ်တရက် ချက်ခြင်းဆိုသလို ကြွက်တွေကို မြင်သွားတယ်။ ကြွက်တွေလည်း ချင်ခြင်းဆိုသလို ဖြတ်ကနဲ့ တွင်းထဲ အလျင်အမြန် ပြေးဝင်မှ သူတို့ကိုယ် သူတို့ ကာကွယ်နိုင်တယ်။ ဖိုးဝက်ဖြူကြီးက အားလုံး ငြိမ်ဖို့ သူ့ လက်ချောင်း ကို ထောင်ပြလိုက်တယ်။
“ရဲဘော်တို့ ဒီမှာ ရှင်းလင်းစရာ ပြောစရာတွေကို ပြောမှဖြစ်မယ်။ ခြံမွေး တိရိစ္ဆာန်တွေ မဟုတ်တဲ့ ကြွက်နဲ့ ယုန်တွေ လိုမျိုး တိရိစ္ဆာန်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိတ်ဆွေလား၊ သို့မဟုတ် ရန်သူလား။ မဲပေး ဆုံးဖြတ်ကြရအောင်။ ကျွန်တော် ဒီ မေးခွန်းကို အစည်းအဝေးမှာ တင်သွင်းပါတယ်။ ကြွက်တွေဟာ ရဲဘော် ရဲမက်တွေ ဖြစ်ပါသလား။”
မဲများကို ခဏအတွင်း ရယူလိုက်တယ်။ မဲဆန္ဒ အများစုက ကြွက်တွေဟာ ရဲဘော်ရဲမက်တွေ ဖြစ်တယ်လို့ ထောက်ခံကြတယ်။ သဘောမတူတဲ့ မဲဆန္ဒ လေးမဲရတယ်။ နောက်မှ သိရတာက ခွေးသုံးကောင်နဲ့ ကိုရွှေကြောင် တို့က ဟိုဖက်ရော ဒီဖက်ပါ မဲတွေ ပေးကြတာ။ အဲဒီနောက် ဖိုးဝက်ဖြူကြီး ကဆက်ပြီးတော့
“ကျွန်တော် စကား နည်းနည်း ပြောစရာ ရှိတယ်။ ကျွန်တော် ထပ်ပြောရမယ်။ အမြဲတမ်း သတိရပါ။ ခင်ဗျာတို့ ရဲ့ တာဝန်ဟာ လူနဲ့ လူတွေရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း လမ်းစဉ်တွေကို အမြဲတမ်း တိုက်ခိုက် ရမှာ ဖြစ်တယ်။ ခြေနှစ်ချောင်း ရှိရင် ရန်သူလို့ သတ်မှတ်ရမယ်။ ခြေလေးချောင်း သို့ မဟုတ် အတောင်ပံတွေ ရှိရင် မိတ်ဆွေပဲ။ ပြီးတော့ လူတွေကို အမြဲတမ်း ရင်ဆိုင် တိုက်ခိုက်ဖို့ အမြဲတမ်း သတိရနေပါ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ လူတွေရဲ့ အမူအကျင့်တွေကိုလည်း ဘယ်တော့မှ အတုမခိုးရဘူး။ အကယ်၍ ကျွန်တော်တို့က လူတွေကို တစ်ချိန်မှာ လွှမ်းမိုးအုပ်စိုးနိုင်ခဲ့သည့်တိုင်အောင် သူတို့ရဲ့ မကောင်းတဲ့ အမူအကျင့်တွေကို အတုမယူရဘူး။ ဘယ်တိရိစ္ဆာန်မှ အိမ်နဲ့ မနေရဘူး။ အိပ်ရာနဲ့ မအိပ်ရဘူး။ အဝတ်အစားတွေ မဝတ်ရဘူး။ အရက် မသောက်ရဘူး။ ဆေးလိပ်မသောက်ရဘူး။ ပိုက်ဆံ မကိုင်ရဘူး။ ပြီးတော့ ကုန်ရောင်း ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင် မပတ်သက်ရဘူး။ လူတွေရဲ့ အမူအကျင့် စရိုက်တွေအားလုံးဟာ မကောင်းမှု ဒုစရိုက်တွေပဲ။ အဲဒါတွေ အားလုံးအပြင် ဘယ်တိရိစ္ဆာန်မှ တိရိစ္ဆာန်အချင်းချင်း နိုင်ထက်စီးနင်း မဆက်ဆံရဘူး။ အားနည်းတဲ့ တိရိစ္ဆာန် ဖြစ်စေ၊ အားကြီးတဲ့ တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်စေ၊ လိမ္မာပါးနပ်တဲ့ တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်စေ၊ သာမန်ရိုးရိုးသားသား တိရိစ္ဆာန်ပဲ ဖြစ်စေ၊ အားလုံးဟာ တသွေးတည်း တသားတည်း ညီရင်းအစ်ကို မောင်နှမတွေဖြစ်တယ်။ ဘယ်တိရိစ္ဆာန်မှ အခြားတိရိစ္ဆာန်ကို မသတ်ဖြတ်ရဘူး။ တိရိစ္ဆာန်အားလုံး ဟာ တန်းတူ အညီအမျှ ရှိရမယ်။”
“ရဲဘော်တို့ အခု… မနေ့ညခဲ့ မက်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အိပ်မက် အကြောင်းကို ပြောပြမယ်။ အဲဒီ အိပ်မက်အကြောင်းကို ကျွန်တော် ခင်ဗျားတို့ကို ဘယ်လို ဖေါ်ပြရမလဲ။ အဲဒီ အိပ်မက်က လူတွေ ဒီကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်ကနေ လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ အချိန်ကာလ အကြောင်းပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ အိပ်မက်က ကျွန်တော် မေ့ပျောက်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ပြန်လည် အမှတ်ရစေတယ်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းက ကျွန်တော် ဝက်ပေါက်ကလေးဖြစ်တုန်းကပေါ့၊ ကျွန်တော့် အမေနဲ့ အခြား ဝက်မကြီးတွေ ဆိုလေ့ဆိုထ ရှိခဲ့တဲ့ သီချင်းဟောင်း တစ်ပုဒ်ပါ။ သူတို့က အဲဒီ သီချင်းရဲ့ သံစဉ်နဲ့ ပထမ စာသား သုံးလုံးလောက်ပဲ သိကြတယ်။ အဲဒီ သီချင်းရဲ့ သံစဉ်ကို ကျွန်တော် ငယ်စဉ် ကလေးဘဝကတည်းက အကျွမ်းတဝင် ရှိနေခဲ့တာ။ ဒါပေမယ့်လည်း အဲဒီသံစဉ်နဲ့ သီချင်းကို စိတ်ထဲကနေ မေ့ပျောက်နေတာ အချိန်ကာလအားဖြင့် တော်တော်ကြာကြာရှိလှပြီ။ ဒါပေမယ့် မနေ့ညကပဲ အဲဒီသီချင်းအကြောင်း ကျွန်တော့် အိပ်မက်ထဲမှာ ပြန်လည် အမှတ်ရမိတယ်။ ပိုပြီး ထူးဆန်းတာက အဲဒီ သီချင်းရဲ့ စာသားတွေပါ ပြန်လည် အမှတ်ရလာတယ်။ ကျွန်တော် ပြောရဲတာ တစ်ခုရှိတယ်။ ဒီ သီချင်းဟာ ဟိုးအရင်တုန်းက မျိုးချစ်တိရိစ္ဆာန်တွေ သီဆိုခဲ့ကြပြီး မျိုးဆက်တွေ တစ်ဆင့်နဲ့ တစ်ဆင့် အကူးအပြောင်း ဆင်းသက် လာတဲ့ အခါမှာ ပျောက်ကွယ် သွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်။ ရဲဘော်တို့ အခု ကျွန်တော် အဲဒီ သီချင်းကို ဆိုပြမယ်။ ကျွန်တော်ဟာ အသက်ကြီးပြီ။ ကျွန်တော့် အသံတွေလည်း ကွဲအက်နေလိမ့်မယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း ကျွန်တော် ဒီ သီချင်း သံစဉ်ကို ခင်ဗျားတို့ကို သင်ပေးတဲ့ အခါ ခင်ဗျာတို့ ကိုယ်တိုင် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် သီဆိုတတ်လိမ့်မယ်။ ဒီသီချင်းကို “ဗမာပြည်ရဲ့ မျိုးချစ် အာဇာနည်များ” လို့ ခေါ်တယ်။”
ဖိုးဝက်ဖြူကြီးသည် သူ့လည်ချောင်းကို တစ်ချက်ရှင်းလိုက်ကာ သီချင်းကို စတင်ဆိုတော့သည်။ သူပြောသလိုပင် သူ၏ အသံတို့သည် ကွဲအက်နေသည်။ သို့ပေမယ့် သူသည် သင့်တင့်ကောင်းမွန်စွာ သီဆိုနိုင်သေးသည်။ သီချင်းသည် ရုန်းထ နိုးကြွစေသော သံစဉ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဒဿဂီရိ အသည်းနှစ်လုံး သီချင်းလိုလို၊ ဆင်ကြီး ဂဠုန်ချီ သီချင်းလိုလို သံစဉ်မျိုးဖြစ်သည်။ စာသားများ မှာ
ဗမာပြည်ရဲ့ မျိုးချစ် အာဇာနည်တွေရယ်
မိုးအောက် တခွင်ရဲ့ သူရဲကောင်းတွေရယ်
ရွှေအိုရောင်တွေ ထွန်းတောက်နေတဲ့ ရှေ့ အနာဂတ်ဆီရဲ့
ကြည်နူးဖွယ် တေးသံစဉ်ကို နားဆင်ကြစေ။
မဝေးတော့တဲ့ နေ့ရက်တွေကလည်း လာနေကြပြီ
နိုင်လိုမင်းထက် လူတွေကို မောင်းထုတ်ကြလေ
ဗမာပြည်ကြီး လှိုင်လှိုင် ပေါများ ကြွယ်ဝနေတာ
တို့တွေ သာလျင် စီးပွားကြမယ်။
တို့တွေအားလုံး ချုပ်နှောင်ဘဝ လွှတ်မြောက်စေသား
တို့ကျော တို့ပုခုံးတို့ ရိုက်ပုတ်ခံခြင်း ဝေးရစေသား
ရိုင်းစိုင် လက်နက်တွေလည်း ပျက်သုံးကြစေ
ရက်စက် နှိတ်စက်ခံရခြင်းလည်း ကုန်ဆုံးစေ။
အတိုင်းထက် အလွန် ချမ်းသာကြွယ်ဝကြမယ်
စပါးဆန်ရေ လှိုင်လှိုင် ပေါလို့
သီးနှံကောက်ပဲ၊ ငရုတ် ပဲပြောင်း
တို့ဘဝရဲ့ နေ့ရက်များမှာ ပြည့်လျှံဖြိုးမောက် ရစေကွယ်။
တို့မြန်ပြည်သည်လည်း နေခြည်ဖြာထွန်း လင်းနေတဲ့
သန့်စင် ကြည်လင် ချောင်းအင်းအိုင်လည်း စီးနေတဲ့
နုနုညင်သာ လေညင်းပြေလည်း သော့နေလေတာ
တို့တွေအား လုံး လွတ်လပ်ကြတဲ့ နေ့ရက်ပေါ့။
သေပစေ ကြေပစေ ၊ အရှုံးမပေး မလျှော့ ဇွဲနဲ့
လွတ်လပ်ခြင်းရဲ့ ပန်းတိုင်ဆီသို့ ချီတက်ကြမယ်ကွယ်။
သီချင်း သီဆိုသံသည် တိရိစ္ဆာန်များအားလုံးကို အလွန်အမင်း စိတ်တက်ကြွစေသည်။ ဖိုးဝက်ဖြူကြီး သီချင်း အဆုံးသို့ ရောက်လုရောက်ချိန်တွင် တိရိစ္ဆာန်များအားလုံး သီချင်းကို ကိုယ်တိုင် သီဆိုနေကြလေပြီ။ အားလုံးထဲက အညံ့ဖျင်းဆုံးအကောင်သည်ပင် သံစဉ်နှင့် စာသား အချို့ကို လိုက်လံ သီဆိုနိုင်လေသည်။ ထက်ထက်မြက်မြက် ရှိသော အကောင်တွေဖြစ်သည့် ဝက်နှင့် ခွေး တို့သည် သီချင်းတစ်ပုဒ်လုံးကို တစ်ခဏအတွင်း မှာ နုတ်တိုက် ရွတ်ဆိုနိုင်လေသည်။ ထို့နောက် နှစ်ခေါက် သုံးခေါက်လောက် လေ့ကျင့် သီဆိုပြီး ကြသည့် အခါတွင် ယာခင်းခြံတစ်ခုလုံး ညီတူ သံပြိုင် သီဆိုသံဖြင့် ဟိန်းထွက် သွားလေသည်။ နွားများက မြည်ဟီးကြသည်။ ခွေးများက အူဟစ်ကြသည်။ သိုးများက ပဲသံများ ပြုကြသည်။ မြင်းများက လည်း ဟီးကြသည်။ ဘဲများကလည်း တစ်ကွပ်ကွပ်နှင့် အော်သည်။ အားလုံးသည် သီချင်းဖြင့် ပျော်ရွှင်ကြည်နူးကြလျက် ငါးကြိမ်တိတိ ဆက်တိုက် ဟစ်အော် သီဆိုကြသည်။ အကယ်၍သာ တားမည့် ဟန့်မည်သူများ မရှိလျှင် ညလုံးပေါက် အဆက်မပြတ် သီဆိုဖွယ် ရှိသည်။
ကံမကောင်းစွာပင် သီချင်း သံပြိုင် ဟစ်အော်သံက ကိုသာဒွန်ကို အိပ်ရာမှ နိူး လိုက် သလိုဖြစ်သွားသည်။ ယာခင်းထဲ မြေခွေးများ ဝင်နေသလားလို့ ကိုသာဒွန်းတစ်ယောက် အိပ်ရာမှ ရုတ်တရက် ထသည်။ အိပ်ခန်း နံရံထောင့် တွင် အမြဲတမ်း ထောင်ထားသော သေနတ်ကို ကောက်ယူလိုက်သည်။ ထို့နောက် ညမှောင်မှောင် ယာခင်းထဲသို့ သေနတ်ကျည်ကို ရမ်းသမ်းပစ်လိုက်သည်။ ကျည်ဆံတို့သည် စပါးကျည်၏ နံရံထဲသို့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သွားသည်။ တိရိစ္ဆာန်တို့၏ အစည်းအဝေးလည်း အလျင်အမြန် ရုတ်သိမ်း ရသည်။ အားလုံး ကိုယ်အိပ်စက် သည့် နေရာကိုယ်စီသို့ အလျင်အမြန် ပြန်ပြေးကြသည်။ ငှက်တို့ သည် အိပ်စက်ရာ ထုတ်တန်းဆီကို ပျံတက် ကြသည်။ အခြား တိရိစ္ဆာန်တို့သည် အိပ်စက်ရာ ကောက်ရိုးခင်းသို့ ပြန်ကြသည်။ တစ်ခဏ အတွင်းတွင် ယာမြေခြံ တစ်ခုလုံး ပကတိ အိပ်စက် ခြင်းသို့ ရောက်ရှိသွားသည်။